ပုဂံမြေမှ ရိုးရာမြင်းပြိုင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပုဂံမြေမှ ရိုးရာမြင်းပြိုင်ပွဲ	5
Posted by အောင် မိုးသူ on Aug 18, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.. |5comments
ကြာခဲ့ပါပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာတုန်းက ပုဂံမှာ ပထမဆုံး ရိုးရာမြင်းပြိုင်ပွဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ရိုက်ကူးရေးသွားရမယ်ဆိုတော့ မြင်းပြိုင်ပွဲကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူးလေ။
ပြိုင်မယ့်ကွင်းကြီးက အကျယ်ကြိး မဏ္ဍပ်ကြီးထုပ် စတိတ်စင်တွေလည်းပါတယ်။
အညာပွဲဈေးသည်တွေနဲ့ လာတဲ့သူတွေတိုင်းကိုလည်း တစ်နေ့လုံးထမင်း
ကျွေးတယ်။ အညာပွဲဈေးလေးတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ်။ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အခုမှ ပြန်ဝေမျှခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
မိုးရိပ်မိုးသားတွေနဲ့ မှုန်ပြပြပေါ့ အစာကြီးကတည်းက ဝါသနာရှင် ပရိတ်သတ်တွေက အများကြီး။ ထန်းပင်တွေ အစီအရီနဲ့။
ဖွင့်ပွဲမှာ မြင်းတွေ မြင်းလှည်းတွေ အလှပြတာ။ ထိပ်ဆုံးက ထွက်လာတာ ပုဂံအဝတ်အစားနဲ့ ဦးကျော်သူကြီး။
လာသမျှလူကျွေးဖို့ ပုတ်တွေနဲ့ ချက်တာနော် သူတို့ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီး။
ဦးရွှေရိုးနဲ့ ဒေါ်မိုး ကြည့်ကောင်းပ
ခုန်တာအလှပြတဲ့ပွဲ ပွဲနာမည်တောင် မေ့နေပြီ
ဒါက မြင်းစီးတာ မြင်းရဲ့ ခွာ ဖနောင့် ခြေထောက်တွေ ဘယ်လိုပြေးတာထိမိတာပြိုင်တဲ့ပွဲ
ဒါကတော့ တီးလုံးနဲ့ စီးတာတဲ့
နောက်တစ်ပွဲရှိသေးတယ် ဒုန်းပြိုင်ပွဲဆိုတာ အမြန်ဆုံးပြေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲပေါ့ မြင်တွေကိုလည်း ဆေးကျွေးထားရတယ်ပြောတယ ပြေးလိုက်ကြတာ ကြောက်စရာတောင်ကောင်းတယ်။ မြန်လိုက်တာလည်း ပြောမနေနဲ့။
Foolish Girl says: မန္တလေးမှာဆိုရင် နွားအလှပြိုင်ပွဲ နွားပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာကြုံဘူးတွေ့ဘူးတယ် အခုတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: နှစ်တိုင်းလုပ်တာလားဟင် . . . စုံစမ်းဦးမှ . . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မနှစ်ကမှ ပထမဆုံးလုပ်တာ ဒီနှစ်လည်း လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ အဓိက မတည်တာက Bagan Myanmar Company က လိုချင်ရင် ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် နံပါတ်ပြောမယ်။
Thint Aye Yeik says: .ဒေါ်မိုးအဖြစ်…. သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူက…အောင်မိုးသူဆိုတာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မသိဘူးဟယ်။
နိနှယ်…ရုပ်ဖျက်တော်ချက်။ ဒါနဲ့… ထန်းရည်သောက် ပြိုင်ပွဲ ရှိတယ် ကြားမိလား…
Foolish Girl says: တကယ်လား မထင်ရဘူးနော်